Akhriso Kala Duwanaanta Saacadaha Dalalka laga Soomayo Dowladaha Islaamka iyo kuwa caalamka | Allbanaadir News	Akhriso Kala Duwanaanta Saacadaha Dalalka laga Soomayo Dowladaha Islaamka iyo kuwa caalamka
Akhriso Kala Duwanaanta Saacadaha Dalalka laga Soomayo Dowladaha Islaamka iyo kuwa caalamka
Warbixintaan waxa ay ka hadleysa kala duwanaashiyaha Saacadaha Wadamada kala duwan laga soomayo, iyo inta saac ay kala horeeyaan Dalalka.
Jaziiradda Comoros ee Dhacda Bariga Afrika waxaa laga soomaa 12-Saac iyo 37-Daqiiqo, Aljazeeria dhacda Waqooyiga Afrika 15-Saac iyo 45-Daqiiqo, Canada oo dhacda Waqooyiga Ameerika waxaa laga soomaa 19-Saac iyo 57-Daqiiqo.
Xogtaan oo uu Uruuriyay Wargeyska Alayam oo kasoo baxa Magaalada Manama ee Caasimadda Bahreyn ayaa dhanka Australia oo ku hareereesan Badweynta India iyo Pacific waxaa laga afxirnaanaa 11-Saac iyo 59-daqiiqo.
Qeybtaan waxaa uu Wargeyska ku Qeexay Dalalka ugu Saacadaha gaaban iyo kuwa ugu dheer ee laga Sooma Bisha Ramadaan
Soomaaliya 13-Saac iyo 27-Daqiiqo, Yemen 14-Saac iyo 7-Daqiiqo, Suudaan 14-Saac iyo 8-Daqiiqo, Muritaaniya 14-Saac iyo 16-Daqiiqo, Saldaladda Cumaan 14-Saac iyo 37-Daqiiqo, Boqortooyada Sacuudiga 14-Saac iyo 41-Daqiiqo, Iyo Isku Tagga Imaaaraatka Carabta oo isna ah 14-Saac iyo 41-Daqiiqo.
Qeybtaan waxaa iyanna ku jira Dalal kale oo Dhowr ah Waxa ayna kala yihiin
Bahreyn 14-Saac iyo 49-Daqiiqo, Kuwait 15-Saac iyo 4-Daqiiqo, Masar 15-Saac iyo 7-Daqiiqo, Falastiin 15-Saac iyo 15-Daqiiqo, Urdun (Jordan) 15-Saac iyo 17-Daqiiqo, Ciraaq 15-Saac iyo 24-Daqiiqo, Morocco 15-Saac iyo 25-Daqiiqo, Siiriya 15-Saac iyo 25-Daqiiqo, Lubnaan 15-Saac iyo 27-Daqiiqo, Liibiya 15-Saac iyo 31-Daqiiqo, iyo Tunisiya 15-Saac iyo 45-Daqiiqo.
Qeybtaan waxaa ku jira dalal kala duwan
Iceland 19-Saac iyo 22-Daqiiqo, Norway 19-Saac iyo 19-Daqiiqo, Sweden 18-Saac iyo 56-Daqiiqo, Russia 18-Saac iyo 29-Daqiiqo, Denmark 18-Saac iyo 26-Daqiiqo, England 18-Saac iyo 9-Daqiiqo, Argentine 11-Saac iyo 57-Daqiiqo, Mareykanka (USA) 16-Saac iyo 4-Daqiiqo, Hindiya (India) 14-Saac iyo 59-Daqiiqo, iyo wadanka ugu dambeeya oo ah Malaysia 13-Saac iyo 22-Daqiiqo.